Maxaad Noo Dooratay - Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co. Ltd.
Nongchuanggang Cross Border E-commerce (Weifang) Co. Ltd waxay ku dadaali doontaa inay dhisto xaruunta xuduudaha iskutallaabta xuduudaha ee ganacsiga caalamiga ah ee iskutallaabta, iskaashiga iyo adeegga adeegga sarrifka, xarunta wax soo saarka iyo wax soo saarka, xarunta ganacsiga iyo qaybinta, iyo inay ogaato isdhexgalka boodboodka ee warshado badan. Waxaan u qaadanaa barxadda e-commerce ee xudduudaha xuddunta u ah barta laga bilaabayo si kor loogu qaado horumarka heerka sare ee beeraha, waddamada dhoofinta lala beegsanayo waxaa ka mid ah Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, Ruushka, Koonfur-bari Aasiya, Koonfur Afrika, Bariga Dhexe, Yurub iyo Mareykanka, Kanada, Hindiya. Hawlaha barxaddu waxay ka kooban yihiin maareynta nidaamka, gorgortanka dalabka, caadooyinka Big Data, logistics-ka caalamiga ah, bakhaarka dibedda, iwm. Sidoo kale waxay u qaabaysantahay baahiyaha ganacsatada.
Isku-darka kheyraadka gudaha iyo shisheeyaha iyada oo loo marayo Xarunta Big Data, waxay dhistay barxad ganacsi oo ballaaran oo dhoofinta xuduudaha ah si loo gaaro xaddiga saxda ah ee u dhexeeya macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Abuur oo qoto-dheer nooc cusub oo ganacsiga ka-ganacsiga xuduudaha ah. Iyadoo loo marayo isdhexgalka badan ee khadka tooska ah ee internetka, gudaha iyo dibaddaba, isku darka ganacsatada gudaha ee internetka iyo Alibaba, Jingdong, Taobao, T-mall, Pinduoduo, ajaanib fara badan oo ajnabi ah oo leh Amazon, Aliexpress, Alibaba International, qoto dheer iskaashiga, sida maaddaama loo yaqaan 'eBay platform' oo leh habab ganacsi oo caalami ah oo qumman, waxay siisaa shirkadaha hal-joogsi maareynta suuqyada internetka, isla mar ahaantaana la furo akadeemiyadda beeraha, adeegga bilaashka ah ee la siinayo shirkadaha leh awoodda xudduudaha looga baahan yahay inay ku socodsiiyaan ganacsiga nooc kasta oo xirfadlayaal ah aqoon iyo xirfado.